Ku Biiri Taladaada Xuska 29 ka hidaar ee Maalinta Qowmiyadaha iyo Shucuubta - Cakaara News
Ku Biiri Taladaada Xuska 29 ka hidaar ee Maalinta Qowmiyadaha iyo Shucuubta
(cakaaraRa'yi)Magaceeygu waa Saalax Xuseen Mullaax_ xaf.Iskaashiga horu.ee Deegaanada Soomaalida iyo Oromada. Bahda cakaaranews waad salaamantihiin.dadaalada aad ku hawlantihiina waad ku mahadsatihiin. Waxaan rabaa wixii aragtideyda iyo talo bixin ah ka dhiibto diyaargaroowga xuska maalinta Qowmidaha,Shucuubta iyo Dadyoowga dalkeena Itiyoobiya.
Marka hore xuska malinta Qowmiyadah,Shucuubta iyo Dadyoowga Itiyoobiya ee lagu qabanayo degaankeena magaala madaxdiisa Jijiga waa mid taariikhi ah,qiimo fara badan iyo ahmiyad gaar ahna u leh shacabka deegaanka soomaalida itoobiya.
Marka xiga waxaa na looga baahanyahay dhammaan shacabka deegaanku heerarkiisa kala duwan si guud waa in loo fahmaa muhiimada uu noo leeyahay Xuskan in deegaankeena lagu qabto marka laga eego dhinac siyaasadeed,dhaqaale,isdhexgalka Qowmiyadaha iyo arimaha bulshadaba.waa mid aan ku muujineeyno taarikhdeena,dhaqankeena suuban iyo jiritaankeenaba.sidoo kale waa tii an ku cidhib tireeyno aragtidii khaldaneeyd ee na laga heeystey.
Sida la wada ogsoonyahay DDSI waxeey dadaal aad u sareeya oogu jirtaa diyaargaroowga xuska maalinta Qowmiyadaha sidii loogu tala galey inuu u dhaco.
hasa yeeshe dadaalka dowlada keliya inuu ku koobnaado ma aha kaalinta ugu weeyn waxaa iska leh shacabka deegaanka soomalida.waana in la dareensanaada xuskan inuu yahay xuska shacabka deegaanka soomaalida. waxaan loo baahanyahay dadaalka DDSI uu ku hawlanyahay shacabka degaanku meel kasta ha jooge kaalinta ku aaddan dawlada ku garab istaaga oo kasta waajibkeeda ay gudaaa.waxuuna si gaar xilku u saaranyahay shacabka ku nool magaalo madaxda deegaanka soomaalida ee jijiga iyo nawaaxigeda inta ku nool.waana iney isu diyaariyaan martida xuskaas u imaan doonto sidii loo qaabili lahaa iyo kaalintooda si aay u gudan lahaayeen. Shacabka ku nool caasimada JIjiga iyo nawaaxigeeda waxeey matalaan oo mas'uul ka yihiin ineey qabtaan oo fuliyaan kaalintii guud ahaaneed ee shacabka degaanka somaalida. Marka waxaan ku talo bixin lahaa
1.In la sameeyo wacyi gelin guud cid kasta kaalinteeda si ay u ogaato oo fuliso.gaar ahaan shacabka ku nool magaalada jijiga marka hore si guud wacyi gelin in loo sameeyo oo kaalinta looga baahanyahay loo sheego. 2.Shacabka magaaladu tuulooyinka ay ka tirsanyihiin lagu kulmiya si ay ooga wada hadlaan kaalintooda iyo waajibka ka saaran. 3.Martida noo imaan doonto soo dhoweeyntooda looma baahna shacabka magaalada oo dhan ee waa la sameeya tuulo kasta shacabka heerarkiisa kala duwan dad kooban in laga xulo oo diyaar ay noqdaan.iyadoo laga qeybgelinayo Qowmiyadaha kale ee magaalada ku nool. 4.Sidaan wada ogsoonahay kooxihii kala duwanaa ee wakhtigii dhaweeyd soo marey Gobolada Deegaanka meela ka mid ah waxaa dareenkooda wax ka bedeley waa soo dhoweeynta shacabkeenu uu sameeyey.marka martida qalbi furan iyo niyada fiican shacabkeenu inuu u soo dhoweeyo waa arin waajib ah. 5.Martidu inta badan waxeey soo marayaan jidka laamiga ah waxaana loo baahanyahay magaalooyinka ama tuulooyinka jidka laamiga ee Addis ka imaanaya ku yaalla waa iney isu diyaariyaan iney soo dhoweeyan maalmaha aay soo marayaan martidu loona sheega. 6.waa in la diyaariya guddi addag dhinaca qaabilaada u qaabilsan qowmidaha kala duwan tiraada intuu ogaado goobihii loogu talagaley kala geeyn karo .
7. Waxaa marti noo ah Qowmiyado kala duwan oo kala dhaqan ah marka cid kasto waa in loo tixgeliya dhaqankeeda loona xishmeeya oo dareen kalena laga muujinin.
8.DadkaBaayac-mushtarka ama ganacsatada si gaar ah waa in loogu sheegaa martida wax ka iibsaneyso iney soo dhoweyaan qiimo fiicana ay wax ooga iibiyan
9.. Dhinaca nabadgelyada waa arin shaqsi kasta khuseeysa oo cid aay gaar u tahay ay jirin.cid kasta kaalinteeda waa iney gudataa oo nabada isu taagtaa.
ugu danbeeyn wixii qorshayaasha waawayn ah maadama ay xukuumadu Guntiga u xidhatay inta badan DDSI maadaama aay awooda saartey oo ay socdaan kama hadalayo intaasi igu filan. waad
mahadsantihiin------------sdaas iyo kulankeena danbe